Murashax MW oo soo dhaweeyay habraacyada doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Murashax MW oo soo dhaweeyay habraacyada doorashada
Waxaan wali caaddeyn mowqifka Golaha Midowga Musharixiinta, ay ka qaateen habraacyada shalay la saxiixay, Cabdikariin Xuseen Guuleed, ayaana maalmihii la soo dhaafay caan ku noqday soo dhaweynta dhacdooyinka la falgala siyaasadda ee ka dhaca dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynihii hore ee Galmudug, ahna hoggaamiyaha Xisbiga Sahan, Musharax Madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed, ayaa si weyn u soo dhaweeyay, habraacyada ay shalay saxiixeen Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, Madaxda Maamul goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Guuleed, wuxuu sheegay in dalku u baahan yahay horu-socod iyo in hey’adihiisa dastuuriga ah dib loo soo doorto. “Danta guudna laga hormariyo danta gaarka ah”.
“Daraasad iyo wadatashi dheer ka dib waxaan soo dhaweynayaa natiijada ka soo baxday shirka golaha wada tashiga Qaran iyo habraacyada kabaya heshiiskii 17 September ee uu golahu soo saaray”. Ayuu yiri yiri Guuleed.
Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka, wuxuu intaas ku daray in madaxda Golaha Wadatashiga Qaran iyo gudiyada loo igmaday doorashooyinka loogaa fadhiyo “in ay xil weyn iska saaraan habsami u qabsoomidda doorashooyin hufan oo ay bulshada Soomaaliyeed ku kalsoonaan karto”.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa dhankiisa duray habraaca ay saxiixeen Golaha Wada-tashiga, wuxuuna muujiyay in habraacaan uusan waxba ka duwanayn kuwii hore.
Warar 27 September 2021 0:28
Wasiir saaxiib la ah Farmaajo oo lagu qashqashaadey Puntland
Warar 26 September 2021 20:36
Rooble oo la kulmay Taliyeyaasha Booliska iyo AMISOM
Warar 26 September 2021 16:38
Shirqoollo ayay maleegayaan Farmaajo iyo Fahad - GMM
Warar 26 September 2021 12:43